Archive du 20200220
Hery Rajaonarimampianina Nomen’ny Vondrona Afrikanina toerana ambony
Notendren’ny Vondrona Afrikanina hitarika iraka fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena any Togo ny filoha Malagasy teo aloha Hery Rajaonarimampianina.
Miaka-pofona ny Monde Justice “Toherinay ny tsikombakomba amin’ny Frantsay”
Eto Madagasikara ny minisitry ny raharaham-bahiny Frantsay Jean Yves le Drian anio sy rahampitso.
Fahasarotam-piainana Tsy midika hoe afaka mifamono eto isika, hoy ny CFM
« Aiza ho aiza isika malagasy ankehitriny amin’ny fanajana ny hasin’ny aina amin’ny fanajana ny hasin’ny olombelona ?”,
Minisitra Jean Yves le Drian Tonga hanamafy ny politikan’i Frantsa eto Madagasikara
Hihaona amin’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny mpitondra ambony Malagasy i Jean Yves Le Drian minisitra
Politika sy fiainam-pirenena Hanavao ny paikadiny ny TIM
Hamory ireo tompon'andraikitra sy lohandohan’ny mpisorona ao aminy ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) ny alarobia 26 febroary ho avy izao.
Famerenan-danja ny vaky boky Tafiditra ao anatin’ny «fanekem-pandaharan’asa»
Anisan’ireo fifanekem-pandaharan’asa (contrat programme) nataon’ny minisiteran’ny serasera sy kolontsaina tamin’ny filoham-pirenena ny famerenana ny vaky boky any an-dakilasy.
Tontolon’ny haino aman-jery Onjam-peo maro no mety hakaton’ny fanjakana
Nesorina tamin’ny toerany araka ny fanapahan-kevitry ny filankevitry ny minisitra natao ny 13 febroary lasa teo ny tale misahana ny “Regulation des Medias”
Fitsarana sy Fanabeazam-pirenena Voatendry ireo sekretera jeneraly vaovao
Mpiasam-panjakana ambony miisa 2 izay heverina fa hitazona toerana tena saropady eto amin’ny firenena no voatendry nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly alarobia 19 febroary.
Paraky-Soanierana Maloto sy maimbo tanteraka ny tanàna
Miantso ny tompon’andraikitra rehetra eto an-tanàna mba hijery akaky ny fako etsy amin’ny Paraky Soanierana fa efa tsy rariny intsony.
« Tournoi de qualification olympique de boxe » Malagasy mianadahy no hiatrik’ady any Dakar Sénégal
Hanomboka anio alakamisy 20 febroary, ao Dakar Sénégal ka tsy hifarana raha tsy amin’ny sabotsy 23 febroary 2020 izao,
Edito Mifamatotra daholo
Mitotongana ny fiainam-pirenena ary hita ho lojika sy mifamatotra daholo ny zava-mitranga rehetra fa tsy misy tokoa, araka ilay nambaran’ny filoham-pirenena hatry ny ela ny kisendrasendra.
Fanamorana ny findramam-bola Manomboka miasa eto Madagasikara ny BIC
Hanamorana ny fisitrahana findramam-bola ny antony nametrahana ny Birao manelanelana ny banky sy ny mpindram-bola (BIC) eto Madagasikara.
Fanalam-baraka an’i Fafah Mahaleo Nampitandrina mafy ny fianakaviany
Misy ny fotoana hanginana sy hitenenana, ny fotoana hisaonana na mbola ao aza ny alahelo.
Raharaha Tahisy Olona 11 hatreto no efa nalaina am-bavany
Anio alakamisy raha tsy misy ny fiovana no fantatra fa hiakatra fampanoavana etsy amin’ny lapan’ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy ilay raharaha Tahisy,
Police de la route Manabe sy mampanaja lalàna fa tsy mampitahotra
Fampiharana ireo fihetsika ara-dalàna rehetra mialoha sy mandritra ny fanakanana fiara na môtô,
Hetsika fanatsarana ny fitateram-bahoaka Hitarina amin’ireo zotra manodidina an’Antananarivo
Mba ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa dia tsy hijanona eto Antananarivo Renivohitra ihany ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana.
Razana hatao “autposie” Alefa eny amin’ny hopitaly Miaramila Soavinandriana
Naato nanomboka ny 11 febroary lasa teo ny fanaovana “autopsie” ireo razana mandalo ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha ka tokony hanaovana izany.
Aretina pesta 7 ireo namoy ny ainy tao anatin’ny fito volana
Olona iray indray tamin’ity volana febroary ity no namoy ny ainy vokatry ny aretina pesta atoditariana tany amin’ny distrikan’Ambositra.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Omena fiofanana ireo kartie mobila ao Antsahadinta
Tsy misy izay kaominina tsy mitaraina amin’izao noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Anisan’ny miaina izany ny kaominina Antsahadinta, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Lisea Ampitatafika Nahazo fotodrafitrasa vaovao mitentina 90 tapitrisa ariary
Feno folo taona katroka ny lisea eny Ankadintany, ao anatin’ny kaominina Ampitatafika.
Ankatsakatsa Ihosy Tafaverina amin’ny tompony ireo omby norobain’ny dahalo
Ny 16 febroary teo sahabo tamin'ny 03 ora folakandro tao Ankatsakatsa dia omby miisa 18 avy any Ihosy,